ब्ल्करहरूलाई बाइपास गर्दै: कसरी तपाइँको विज्ञापनहरू हेर्नुहोस्, क्लिक गरियो, र कार्य गरियो | Martech Zone
ब्ल्करहरूलाई बाइपास गर्दै: कसरी तपाइँको विज्ञापनहरू हेर्नुहोस्, क्लिक गरियो, र कार्य गरियो
सोमबार, मार्च 19, 2018 जेफ कुपिएत्स्की
आजको मार्केटिंग परिदृश्यमा, पहिले भन्दा धेरै मिडिया च्यानलहरू छन्। सकारात्मक पक्षमा, यसको मतलब तपाईंको सन्देशलाई बाहिर निकाल्ने बढी अवसरहरू छन्। नकारात्मक पक्षमा, त्यहाँ दर्शकहरूको ध्यान खिच्नको लागि पहिले भन्दा धेरै प्रतिस्पर्धा छ।
मिडियाको प्रसारको मतलब अधिक विज्ञापनहरू हुन्, र ती विज्ञापनहरू अधिक घुसखोर छन्। यो केवल प्रिन्ट विज्ञापन मात्र होइन, टिभी वा रेडियो व्यवसायिक हो। यो पूर्ण-पृष्ठ अनलाइन पप-अप विज्ञापनहरू हो जसले तपाईंलाई मायालु "X" फेला पार्दछ तिनीहरूलाई हटाउनको लागि, स्वचालित खेल भिडियोहरू देखी सक्नु अघि इच्छित सामग्री, ब्यानर विज्ञापन जुन कहिँ पनि देखा पर्दछ, र विज्ञापन जसले तपाइँलाई retargeting मार्फत पनि ट्र्याक गर्दछ, कम्प्युटरबाट मोबाइल उपकरणमा र फेरि फिर्ता।
व्यक्ति कुनै पनि र सबै विज्ञापनबाट थकित भएका छन्। हबस्पट अध्ययनका अनुसार अधिकांश व्यक्तिहरूले धेरै विज्ञापन अपमानजनक वा घुसपैठ गर्ने, अव्यवसायिक, वा अपमानजनक पाउँदछन्। विज्ञापनदाताहरु लाई बढी के प्रकट हुन्छ कि ती प्रकारका विज्ञापनहरूले दर्शकहरुलाई न केवल वेबसाइटमा उनीहरूको नेतृत्व लिन्छन उनीहरूको नराम्रो राय दिन्छ। उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने ब्रान्डहरू। त्यसोभए तपाईंको मार्केटिंग लगानीले तपाईंको उद्देश्य भन्दा व्यक्तिमा विपरित असर पार्दछ; यसले व्यक्तिमा तपाईंको ब्रान्डको खराब प्रभाव सिर्जना गर्न सक्दछ, अनुकूलको भन्दा।
अधिक विज्ञापन, अधिक निराशा: विज्ञापन ब्लकरहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्
अचम्म मान्नुपर्दैन, मानिसहरूले आजको विज्ञापन बमबारीको निराशाको वरिपरि बाटो फेला पारेका छन: विज्ञापन-ब्लक गर्ने विस्तारहरू। पृष्ठफेयर र एडोब द्वारा भर्खरको रिपोर्ट अनुसार, १ million मिलियन इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले सक्रिय रूपमा विज्ञापन ब्लकरहरू प्रयोग गर्छन् आगत डिजिटल मार्केटिंग सवारीहरू जस्तै ब्यानरहरू, पप-अपहरू र इन-लाइन विज्ञापनहरू उनीहरूको मनपर्ने वेबसाइटहरू र सोशल मिडियामा देखा पर्न रोक्नको लागि, र विज्ञापन ब्लकरहरूको प्रयोग बृद्धि भएको छ। पछिल्लो बर्षमा %०% भन्दा बढि विज्ञापन ब्लकि typicallyले सामान्यतया १ anywhere% - affects०% वेबसाइट प्रकाशकको ​​ट्राफिकबाट प्रभाव पार्छ, र यो विशेष गरी खेल साइटहरूमा विशिष्ट छ, जहाँ दर्शकहरू धेरै टेक-सेभिसहित छन् र विज्ञापन-अवरुद्ध प्रविधि लागू गर्न सक्षम छन्।
त्यसोभए के गर्ने विज्ञापनदाता हो?
ईमेल छनौट गर्नुहोस्
"विज्ञापन ब्लकरहरूलाई बाइपास" गर्न खोज्ने विज्ञापनकर्ताहरू त्यहाँ त्यस्तो माध्यम छन जुन उनीहरूले विज्ञापन-अवरुद्ध घटनालाई रोक्न मद्दत गर्दछ भनेर चकित हुन सक्छ, र यो सामाजिक मिडियाको प्रवृत्ति होईन। यो ईमेल हो। यसलाई विचार गर्नुहोस्: आज इन्टरनेटमा प्राय: प्रयोग हुने अनुप्रयोगहरू फेसबुक वा ट्विटर होइनन्। तिनीहरू वास्तवमा एप्पल मेल र जीमेल हुन्।
ईमेल त्यो स्थान हो जहाँ नेत्रगोलकाहरू छन्, र यो गइरहेका छैनन्, जस्तो कोहीले सोच्दछन्। वास्तवमा, ईमेल पहिले भन्दा शक्तिशाली छ; धेरै ब्रान्डहरू यस वर्ष थप ईमेल पठाउन योजना गर्दछ र त्यो वृद्धिलाई जारी राख्छ। ईमेल मार्केटिंगले 3800 40००% को एक ROI समेटेको छ र कुनै पनि अन्य च्यानल भन्दा धेरै रूपान्तरण ड्राइभ। विज्ञापन सन्देशहरू ती फेसबुकमा भन्दा ईमेलमा देखिन सक्ने सम्भावित बढी हुन्छ, र ईमेल फेसबुक वा ट्विटर भन्दा नयाँ ग्राहकहरू प्राप्त गर्न XNUMX० गुणा बढी प्रभावकारी हुन्छ। सबैमा, त्यो अत्यन्त शक्तिशाली क्षमता हो।
किन ईमेलबाट फिर्ताको उच्च दर? एकदम सीधा, यो एकै स्थानको ब्रान्डको अन्तिम प्रयोगकर्तासँग ठोस, सीधा सम्बन्ध छ - त्यो जडान जो लामो समय सम्म रहन्छ र ब्राउजर, उपकरण वा खोज इञ्जिनमा निर्भर हुँदैन। व्यक्तिहरू उनीहरूको ईमेल ठेगाना दीर्घ-अवधि कायम गर्न चाहन्छन्; तिनीहरू आफ्नो शारीरिक ठेगाना परिवर्तन गर्न बढी सम्भावना हुन्छ तब उनीहरूले आफ्नो ईमेल ठेगाना परिवर्तन गर्नुपर्नेछ।
दुर्भाग्यवस, सबै सुविधाहरूका लागि ईमेल लेराउँदछ, केवल ईमेलहरू पठाएर विज्ञापन ब्लक गर्ने बेवास्ता गर्नेले यसलाई कटाउँदैन; एप्पल मेल वा जीमेल सिधा प्लेटफार्महरू प्रयोग गरी विज्ञापन गर्न यो धेरै नै गाह्रो छ। त्यसोभए तपाईं अझै कसरी ईमेलको शक्ति र यसले उपलब्ध गराउने सबै सम्भावनाहरूको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ?
ईमेल न्यूजलेटर्समा दायाँ नेत्रगोलहरू कब्जा गर्नुहोस्
एउटा तरिका भनेको ईमेल न्यूजलेटरहरूमा विज्ञापनहरू राख्नु हो जुन प्रकाशकहरूले डेलिभर गरेका छन्। इ-मेल न्यूजलेटर्सका प्रकाशकहरू उनीहरूको अवस्थित सवारीहरू मुद्रीकरण गर्ने, तिनीहरूको उत्पादन अधिकतम पार्ने, र अधिकांशतः उनीहरू विज्ञापनको स्थानलाई त्यसो गर्ने तरिकाको रूपमा स्वागत गर्दछन्।
विज्ञापनदाताहरूका लागि, यसको अर्थ तपाइँ अत्यधिक लक्षित, गतिशील रूपमा वितरित विज्ञापनहरू अवस्थित ग्राहक र सम्भावित ईमेल अभियानहरूमा घुसाउन सक्नुहुन्छ, ब्ल्याक दर्शकहरूमा पुग्न विज्ञापन ब्लकरहरूको वरिपरि रही। सबै भन्दा राम्रो, यी दर्शकहरूलाई केहि सामग्री पहिले नै रोचक साबित भएको देख्नको लागि खुल्ला छ। न्यूजलेटर सदस्यहरूले प्रकाशकहरूबाट मार्केटिंग सन्देशहरू प्राप्त गर्न रोजेका छन्। तिनीहरू प्रकाशकको ​​सामग्रीलाई विश्वास गर्छन् र मूल्यवान गर्दछन्। यस विज्ञापन बीचमा तपाईंको विज्ञापनहरू राख्नु तपाईंलाई विश्वास र ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईले आफ्नो विज्ञापनहरू प्रासंगिक, जानकारीपूर्ण र व्यक्तिगतकरण मार्फत पाठकहरूको रुचिमा ट्याप गर्न सक्षम हुनुपर्दछ।
तपाईंको विज्ञापनहरू निजीकृत गर्न सजिलो छ किनकि तपाईं पहिले नै न्यूजलेटरको लक्षित मार्फत पाठकको बारेमा सबै जान्नुहुन्छ। यस व्यक्तिको मनपर्ने, मननपर्ने, व्यक्तित्व र आवश्यकताहरूमा तपाईंको विज्ञापन सामग्री मिलाउनुहोस् र तपाईं विश्वास र वफादारी निर्माण गर्नुहुनेछ, र क्लिक-थ्रू रेटहरूमा बढावा दिनुहुनेछ।
क्लिक-थ्रु टु एक्सनको लागि पर्याप्त बाध्य पार्नुहोस्।
निजीकरणको प्रमुख अंशमा कथा कथन समावेश छ। केवल नयाँ घरेलु उत्पादनको विज्ञापन नगर्नुहोस् - पाठकसँग साझेदारी गर्नुहोस् यस उत्पादनले उनीहरूको जीवन सजिलो बनाउने पाँच तरिकाहरू। केवल एक नयाँ सेवाको विज्ञापन नगर्नुहोस् जसले उनीहरूको समय र चिन्ता बचाउँदछ - उनीहरूलाई मनपर्ने केहि चीज गर्न उनीहरूलाई नयाँ समय प्रयोग गर्ने तरिकाहरू सुझाव दिनुहोस्।
यस प्रकारको अत्यधिक निजीकृत कथाहरू तपाईंको पाठकहरूलाई तपाईंको अवतरण पृष्ठमा लैजान्छ, जहाँ तपाईं तिनीहरूको समस्याको समाधान निकाल्न सक्नुहुनेछ: तपाईंको उत्पादन। त्यस बिन्दुमा, प्रयोगकर्ता व्यस्त र इच्छुक छ, र तपाईंको उत्पादन वा सेवा खरीदको बढी सम्भावना।
सबै भन्दा राम्रो अंश - यो सजिलो छ।
त्यहाँ आज समाधानहरू उपलब्ध छन् जुन यस सम्पूर्ण गतिशील ईमेल विज्ञापन प्रक्रियालाई स्वचालित गर्दछ। यी समाधानहरूले तपाईंलाई न्यूजलेटर प्रकाशकहरूको सही नेटवर्कसँग साझेदार गर्न सक्दछन् जसले सही दर्शकहरू छन्, र तपाईंलाई लक्षित, सान्दर्भिक सामग्री विकास गर्न मद्दत गर्दछ श्रोताहरूलाई तपाईंको ब्रान्डसँग सकारात्मक अन्तरक्रिया गर्न सुनिश्चित गर्न।
ईमेलमा नयाँ दृष्टिकोण, सही विज्ञापन रणनीति, र एक सक्षम, गतिशील ईमेल पार्टनरको साथ, तपाईं सक्नुहुन्छ ब्लकरहरूलाई बाइपास गर्नुहोस् - र सत्य शक्ति प्रयोग गर्नुहोस् जुन ईमेल विज्ञापनले प्रस्ताव गरेको छ।
जेफले PowerInbox, सीईओको रूपमा सेवा प्रदान गर्दछ एउटा अभिनव टेक्नोलोजी कम्पनीले कम्पनीहरूलाई गतिशील सामग्री मार्फत उनीहरूको ईमेल न्यूजलेटरहरू मोनेटाइज गर्न मद्दत गर्दछ। पावरइन्बक्समा सामेल हुनु भन्दा पहिले, जेफले Oversee.net मा राष्ट्रपति र सीईओको रूपमा काम गरे, विश्वव्यापी अपरेसनहरू प्रबन्धन गरे र ओभरसीको स्वामित्व प्राप्त र डोमेन नामको संचालित पोर्टफोलियो निर्माण गरे, कम्पनीलाई इन्टरनेट रियल इस्टेटमा नेताको रूपमा स्थापित गरे। उनको नेतृत्वमा कम्पनीले नेतृत्व उत्पादनमा विविधता ल्यायो, धेरै उच्च वृद्धि र उच्च मार्जिन व्यवसायहरूको निर्माण। त्यो भन्दा पहिले, कुपिएत्स्कीले X1 टेक्नोलोजीहरू, डिजिटल इनसाइट (अन्तर्दृष्टि), सिबेल सिस्टम (ओराकल), र लाउडक्लाउड / अप्सवेयर (हेवलेट-प्याकार्ड) को साथ नेतृत्वका पदहरूमा काम गरे। जेफले सफ्टवेयर, बीमा र बैंकि clients ग्राहकहरूको लागि व्यवसाय रणनीतिहरू विकास गर्दै म्याकिन्से एन्ड कम्पनीको सल्लाहकारको रूपमा आफ्नो क्यारियर सुरु गरे। डिजिटल मिडिया सम्मेलनहरूमा बारम्बार वक्ता, उनी सीएनएन, सीएनबीसी, र धेरै समाचार र व्यापार म्यागजिनहरूमा पनि प्रस्तुत भएका छन्।
Re कारणहरू तपाईंको ईमेल सूची सफा गर्ने र कसरी ग्राहकहरू हटाउने
CMO-on-the-Go: कसरी Gig श्रमिकहरूले तपाईंको बजार विभागलाई फाइदा पुग्न सक्छन्